alinkar nang (@alinkarnang)'s conversations - Wattpad
Oct 11, 2020 11:59AM
အသစ်လေးတွေတင်ထားပါတယ်နော် ဒါပေမဲ့ ရေးလက်စတွေအကုန်ပြီးမှ အသစ်သုံးပုဒ်လုံးကို အတူတူတင်ပါမယ်ရှင့် နှစ်ပုဒ်ကတော့ nl fic လေးပါ နောက်တပုဒ်ကတော့ bl fic လေးပါရှင့်
Reading list လေးတွေထဲထည့်ထားလို့ရအောင်ပါ ဟီးဟီး
@soethiri0 ကျေးဇူးပါရှင့် စောင့်ပေးပါဦးနော် အခုရေးပြီးတင်ချင်ပေမဲ့လဲ ဟိုဟာမပြီး ဒိဟာမပြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါနော်
Thanks for keeping my story in your reading list Love you so much my lovely reader please vote and recommend me
သိုင်းလောကထဲက ပိုင်‌ရှောင်ချင်းနဲ့သွားဒိတ်နေတာမို့ ဒိတ်ပြီးပြန်လာမှပဲ fic တွေကိုဆက်တင်ပေးတော့မယ်နော် သိပ်မကြာပါဘူး အခုကအတွဲ 2ဆိုတော့ အတွဲ4ရောက်ဖို့ နှစ်ရက်လောက်ပါပဲ ဟီးဟီး နေ့မအား ညမအား ကြိုးကြိုးစားစားဒိတ်လိုက်ဦးမယ်
@alinkarnang လာချောင်း လာချောင်း
you are my only one so good!!! happy ending လားဟင္ please!!! ထပ္ up ေပးပါအံုးေနာ္ please!!!fighting!!!
@NimbusMoMo happy ending ပါရှင့် ဟီးဟီး သိုင်းလောကထဲရောက်နေလို့ပါနော် up ပေးပါ့မယ်နော်
ခြဲခြာျခင္းရဲ႕ တမ္းတျခင္းက ျဖစ္ရပ္မွန္လား သာသာ
@wahwahaung2 ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် real life မှာလဲတကယ်ရှ်ိနေတဲ့စုံတွဲလေးပါလို့ နန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတင် အဲ့လိုစုံတွဲလေးတွေကသုံးလေးတွဲလောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ ဒိအတွဲကတော့သက်တမ်းရင့်ပြီး ပေါင်းစည်းသွားနိုင်တာပေါ့နော် ကျန်တဲ့အတွဲတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ကြုံနေကတုန်းပဲရှိသေးတယ်
Fic တွေအကုန်ပြန်စနေပါပြီနော် fic တခုကို တပတ်မှာနှစ်ပိုင်းတင်ပါမယ်
U r my only one (bl fic)
(Myanmar version yizhan fanfic) own creation
My mr.umbrella (bl fic )
(Myanmar  English romance married life fic) own creation
ခွဲခွာခြင်းရဲ့တမ်းတခြင်း(bl fic)(Myanmar romance fic) own creation
Angel and her devil boyfriend
(nl fic) Historical  Chinese  romance fic .Own creation
အားလုံးပေါင်းလေးပုဒ‌်ပေါ့နော် အာ့ကြောင့် ပိုနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ဖတ်တာများတဲ့ ficလေးကိုအပိုတင်ပါမယ်
Complete ဖြစ်သွားတဲ့ nl fic နှစ်ပုဒ်လဲရှိပါတယ် မဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင် ဖတ်ကြပါဦးနော်
(nl fic, historical Chinese romance fic )own creation
ကြုံခဲလှသည့်ဖူးစာ(nl fic , historical Chinese romance fic )own creation
you are my only one ထပ္အပ္ေပးပါအုန္း
@wahwahaung2 ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် ညတင်ပေးပါ့မယ်နော်
Fic တွေအကုန်လုံးကို တပတ်မှာ နှစ်ပိုင်းတင်ပါမယ် ဖတ်အားနည်းတဲ့ ficလေးတွေရော ရေးလက်စနဲ့ရပ်ထားရတဲ့ ficလေး‌ေတွရော အကုန်ပြန်runပါမယ်
တပတ်မှာနှစ်ပိုင်းပဲတင်လို့ စိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့နော် အားဆေးတိုက်ရင်တိုက်သလောက် တင်ပေးမဲ့သူမို့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ficလေးအောက်မှာ မန့်လေးတွေ‌ေတာ့ထားခဲ့ကြပါနော်
ကြုံခဲလှသောဖူးစာက complete ဖြစ်သွားပါပြီ
လက်ရှိ bl love fic က သုံးပိုဒ်ရှ်ိနေပြီး  wall ထဲမှာ nl love fic က  လျို့ဝှက်‌ေသာကြင်ယာတော်ပြီးသွားရင် မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်
Story title က နတ်ဘုရားမလေးနှင့်သူမ၏ချစ်‌ရသောနတ်ဆိုးလေး ပါ
historical romance fic တပိုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ လျို့ဝှက်သောကြင်ယာတော်ပြိးတာနဲ့ up ပါ့မယ်နော်
တနေ့က fb wattpad pg ကိုဝင်ကြည့်မိတော့ အဆုံးထိမတင်လို့ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနေတာလေးတွေကို ရင်ဖွင့်ထားကြတာလေးသွားတွေ့မိလိုက်ပါတယ် ကိုယ်ကလဲ reader တယောက်ကနေ  writer တယောက်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ reader တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပါတယ် အခုချိန်ထိကိုယ်လဲ reader  တယောက်ဖြစ်နေဆဲပါ ကိုယ်အားပေးတဲ့ ficလေးတွေတန်းလန်းနဲ့ရပ်နေရင် အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး ခနခနဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ် တင်လားတင်လားနဲ့ မျော်ရတာလဲ‌အမောပေါ့လေ
အဲ့ဒါတွေကြောင့် ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ficတွေကိုအားပေးတဲ့သူတိုင်းအတွက် ကတိတခုတော့ပေးနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါက ကိုယ်ရေးတဲ့ficတွေအကုန်လံုးကို completeဖြစ်တဲ့အထိရေးပါမယ်လို့
တချို့ ficတွေ ကြာနေတယ်ဆိုတာကလဲ ဦးစားပေးficရှိလို့ ဇတ်သိမ်းခါနီးမလို့ အဲ့ဒိလိုအကြောင်းတွေ‌ကြောင့်ကြန့်ကြာနေရတာပါ ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နော် အကုန်လုံးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ရေးမှာပါ
ပြီးတော့ နောက်တခုက ကိုယ်wallထဲမှာ own creation တွေပဲရှိပါမယ်
အခုလက်ရှိတော့ nl fic နှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် bl fic က သုံးပုဒ်ရှိပါတယ် ပေါင်းငါးပုဒ်‌ပေါ့
nl fic မှာ တပုဒ်က complete ဖြစ်ပြီးသားပါ နောက်ဆုံးခန်းမှာမှပဲ တောင်းဆိုမူ့အရ 18+တခန်းပါပါတယ်
နောက်  nl fic တပုဒ်ကတော့ 18+ mature on ပါ ဇတ်သိမ်းခါနီးနေပါပြီ
ကျန်တဲ့ bl fic လေးတွေကတော့ on going လေးတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ်က happily ever after တွေပဲကြိုက်သူမို့ HE လေးတွေပဲရေးပါတယ်နော်